Ibhanki yokutya yaseNew Jersey ifumana umnikelo wama-33-kW ophahleni lwelanga
Indawo yaseFlemington yokutya okutyayo, ekhonza iHunterdon County, eNew Jersey, ibhiyozele kwaye yatyhila ufakelo lwentsha lwento efakwa kwilanga ngokusika iribhoni ngoNovemba 18 kwiFlemington Area Food Pantry.
Le projekthi yenziwa yenziwa ngumnikelo wentsebenziswano phakathi kweenkokheli zeshishini elanga kunye namavolontiya asekuhlaleni, elowo ebonelela ngezinto zawo.
Kuwo onke amaqela abenegalelo ekwenzeni ufakelo lube yinyani, i-pantry inombulelo ngokukodwa-kumfundi weSikolo samaBanga aPhakamileyo saseNorth Hunterdon, u-Evan Kuster.
“Njengevolontiya kwiFood Pantry, bendisazi ukuba banendleko zombane ezibonakalayo kwizikhenkcezisi nakwizikhenkcisi kwaye ndicinga ukuba amandla elanga angalusindisa uhlahlo-lwabiwo mali,” utshilo uKuster, umfundi waseNorth Hunterdon High School, kwiKlasi ka-2022. Utata usebenza kwinkampani yophuhliso lwamandla elanga ebizwa ngokuba yiMerit SI, kwaye ucebise ukuba sicele amalizo ukuxhasa le nkqubo. ”
Ke abakwaKusters babuza, kwaye iinkokeli zeshishini elanga zaphendula. Ukurhangqa ujikeleze umbono wabo wempembelelo, isileyiti esipheleleyo samaqabane eprojekthi kubandakanya iSolar yokuqala, i-OMCO Solar, iSMA yaseMelika kunye nePro Circuit contracting Electrical contracting isayinelwe kule projekthi. Ngokudibeneyo, banikele ngofakelo lwelanga lonke kwi-pantry, behlisa ityala lonyaka lombane le- $ 10,556 (2019). Ngoku, inkqubo entsha ye-33-kW ivumela ezo mali ukuba zabelwe ukuthengwa kokutya kuluntu lwabo-ngokwaneleyo ukulungiselela izidlo ezingama-6,360.
UJeannine Gorman, umlawuli olawulayo weFlemington Area Food Pantry, ugxininise ubunzima bale asethi intsha. “Idola nganye esiyichithayo kwityala lethu lombane iyidola encinci esinokuyisebenzisa ekutyeni kuluntu,” utshilo uGorman. “Sifeza injongo yethu mihla le; kuyasikhuthaza kakhulu ukuba sazi ukuba iingcali ziyakhathala ngokwaneleyo ukuba zinokunikela ngexesha labo, italente kunye nezinto abanazo ukusinceda siqhubeke nokusebenzela iimfuno zoluntu lwethu. ”
Lo mboniso wesisa ngewungazange ube lixesha, unikwe ifuthe elibi le-COVID-19 bhubhane. Phakathi kuka-Matshi noMeyi, bekukho ababhalisi abatsha abangama-400 kwi-pantry, kwaye kwiinyanga ezintandathu zokuqala zonyaka, babone ukonyuka kwama-30% kubathengi babo. NgokukaGorman, “ukuphelelwa lithemba ebusweni beentsapho njengoko kuye kwanyanzeleka ukuba bacele uncedo” ibubungqina bokuba lo bhubhane ubenefuthe lokuqhwalelisa, esolulela abaninzi kumazinga emfuno ababengazange babe nawo ngaphambili.
UTom Kuster, u-CEO we-Merit SI kunye notata ka-Evan, wayezingca ngokukhokela le projekthi. "Ukujongana nalo bhubhane wehlabathi ngokungathandabuzekiyo kuye kwabanzima kubo bonke abantu baseMelika, kodwa kuye kwaba nzima ngakumbi kuluntu olungakhuselekanga nolusemngciphekweni," utshilo uKuster. "Kwi-Merit SI, sikholelwa ekubeni indima yethu njengabemi bamashishini kukuhlanganisa kwaye siboleke uncedo naphi na apho kukho imfuneko enkulu."
I-Merit SI ibonelele ngoyilo lweziseko zophuhliso kunye nobunjineli, kodwa ikwasebenza njengomququzeleli, isizisa abadlali abaninzi abaphambili ebhodini ukwenza oko kwenzeke. "Sinombulelo kumaqabane ethu ngokunikela ngexesha labo, ubuchwephesha kunye nezisombululo kule projekthi, eza kuthi incede kakhulu abahlali ngeli xesha lengcwaba nelingazange labonwa ngaphambili," utshilo uKuster.
Iimodyuli zelanga ezihambele phambili ezomeleleyo zanikelwa yiLanga lokuqala. I-OMCO Solar, indawo yoluntu kunye ne-utility-scale ye-OEM ye-tracker yelanga kunye nezisombululo ze-racking, inyuse uluhlu lwe-pantry. I-SMA America yanikela nge-inverter ye-Sunny Tripower CORE1.
Iprojekthi yeSekethe yokuThengiswa kombane ifake uluhlu, ngokunikela ngawo wonke umsebenzi wombane kunye nabasebenzi ngokubanzi.
“Iyandimangalisa intsebenziswano phakathi kweenkampani ezininzi ezizinikeleyo kule projekthi… Ndifuna ukubulela bonke abanikeli, nabantu abenze ukuba kwenzeke oku,” utshilo u-Evan Kuster. Kube kukukhanya okuqinisekileyo kuthi sonke ukunceda abamelwane bethu ngelixa sithatha inxaxheba kukutshintsha kwemozulu. ”